fanontaniana CLS DC-10-30F Review
2 taona 3 andro lasa izay - 2 taona 3 andro lasa izay #195 by Gh0stRider203
Tsy mandainga aho mpankafy ny 3 vorona maotera. Efa foana. Ianao zara raha hahita Ahy na inona na inona amin'ny latsaky ny 2 milina.
Izany no tena mahafinaritra ny vorona. dia tonga noho ny maro liveries, tena mahafinaritra tsipiriany, mitantam be fa misy olana kely aminy ...
Hitanareo, Max-vorona isan-karazany izany dia voatanisa toy ny 6,600 km; Max Fuel dia voatanisa toy ny 36,650 US Gal; ary Max maka-eny lanjany dia voatanisa toy ny 572,000 lbs.
Na izany aza, raha mijery FSX ... dia mampiseho Max lanja lehibe toy ny 558,000lbs sy Max allowable 32,368 tsolika toy ny litatra, ny maha samy hafa ny 4,282 litatra.
Amin'izao fotoana izao aho manao ny 6305.0 nm fiaramanidina, dia nidina ho any aho 7% ankavia. Foana aho ao amin'ny mạch cruising .82 (fa izany no mahazatra Cruise hafainganam-pandeha) amin'ny 35,000 tongony, ary nitondra fiara mifono vy eny amin'ny feno. ... Mazava ho azy fa tsy iany aho ho azy ny sisa tavela 4.5 hrs W / o manana ny refuel ....
Messaged CLS aho mba hahitana raha ry zareo nahalala izany, ary amin'izao fotoana izao no miandry hihaino indray.
Tsy nanao fomba ILS mbola (tsy zatra izany LOL Tsy Mifantoka izany à hafa LOL), saingy tsy manantena fa ho sarotra loatra ny manao.
Hatramin'izao anefa .... manome izany aho vorona mahafinaritra A- (Eny nanova ny saina LOL). Indray mandeha aho dia mametraka ny anankiray avy eto anilan'ny Thomas Ruth, aho ka nanao ny famerenana tamin'izany LOL iray mety ho andro, na araka izay mahalana vao manao latsaka noho ny Max-isan-karazany fiaramanidina rehefa entana
Fanovana farany: 2 taona 3 andro lasa izay by Gh0stRider203.
2 taona 2 andro lasa izay #199 by Gh0stRider203
ILS dia somary mahitsy amin'ny vorona io, soa ihany. Marina aloha dia nampiasa ny Keyboard hitsin-dalana, nefa mbola LOL mbola tsy nisy namaly avy CLS ....
Fotoana mamorona pejy: 0.255 segondra